🥇 ▷ OnePlus waxay horumarin doontaa astaamaha casriga ah ee aaladaha casriga ah ✅
OnePlus waxay horumarin doontaa astaamaha casriga ah ee aaladaha casriga ah
OnePlus waa hubaal mid ka mid ah sumadda ugu caansan suuqa Android, intaas oo dhan waxaa mahad leh dareenka ay astaanta lafteeda u leedahay bulshada adeegsadayaasha xiisaha badan. Waxay, dhab ahaantii tahay mid ka mid ah magacyada yar ee wali dhageysta jawaabta isticmaalaha, si loo abuuro badeecado wax ku ool ah oo wax ku ool ah.
Darajooyinka ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay, OnePlus 7 Pro, ayaa lagu qeexay dad badan mid ka mid ah kuwa ugu fiican (haddii aan ahayn tan ugu wanaagsan) aaladda Android ee sannadka 2019. Laakiin qadarinta shirkaddu kama hesho kaliya muhiimada ay shirkaddu u leedahay bulshada dhexdeeda: waxay ka timaadaa, waxkasta, dhaqanka soo jireenka ah ee shirkadda ee tixgelisa barnaamijka kombiyuutarka ee aaladaha u gaarka ah.
KOOWAAD: Xiriir istiraatiiji ah oo lala yeesho aaladaha loogu talaggalay horumarinta casriga casriga
OnePlus 3 iyo OnePlus 3T waa dusha sare ee gaarka ah ee kala duwan ee 2016, marka lagu daro Google Pixels, inay lahaato helay cusboonaysiinta Android 9.0 Pie si rasmi ah, oo keenaya tirinta sanadaha taageerada illaa 3 sano oo buuxa. Rikoor dhab ah oo ku jira duurka Android, oo sida muuqata aan lagu arag aaladaha oo dhan.
Sidoo kale akhri OnePlus 7 Pro iyo Android 10: waa kuwan warka oo dhan!
Dhawaan shirkada Shiinaha ayaa cadeysay inay damaceeda tahay inay badasho siyaasadeeda ku aadan horumarka Customka ROM, gaar ahaan marka la eego i aaladda dhamaadka nolosha, oo dhawaan joojin doonta in si rasmi ah loo taageero.
Shirkaddu runtii way leedahay sheegay dhowr jeer in uu doonayo in uu si dhow ula shaqeeyo horumariyeyaasha si loo hubiyo abuurista Custom ROM in badan oo xasilloon oo shaqeynaya ayaa awood u leh inay sii dheereeyaan taageerada barnaamijyada softiweer qalabkooda mahadnaqa bulshada.
OnePlus 3T, mid ka mid ah aaladaha ugu dheereeya orodka taariikhda OnePlus taariikhda Evosmart.it
A runtii dabeecad wanaagsan, taas oo aan la arkin muddo, taas oo sii kordhineysa sumcadda shirkadda Shiinaha ee dhanka horumarinta barnaamijyada.
Intaa waxaa dheer, guriga Shiinaha ayaa caddeeyay in wixii hadda ka dambeeya ka shaqeyn doona xallinta arrinta la xiriirta maaraynta barnaamijyada asalka, taas oo telefoonada casriga ah qaarkood isu rogeen mid aad u dagaal badan.
OnePlus waxay leedahay taariikh ballaadhan oo ballamo ah. Sidaa darteed, waxaan rajeyneynaa in shirkaddu ay si adag uga shaqeyn doonto xallinta arrimahan oo ay taageero ku filan siinayso soo-saareyaasha madax-bannaan.